Qarax ka dhacay Ex-Koontarool Afgooye oo dhimasho Injineero Turki ahi ku jiraan geystay | Xaysimo
Home War Qarax ka dhacay Ex-Koontarool Afgooye oo dhimasho Injineero Turki ahi ku jiraan...
Qarax ka dhacay Ex-Koontarool Afgooye oo dhimasho Injineero Turki ahi ku jiraan geystay
Waxaa isa soo taraya khasaaraha rasmiga ee ka dhashay qaraxii ismiimaadiinta ahaa ee saaka aroortii hore ka dhacay isgoyska Ex-Koontarool Afgooye ee duleedka magaalada Muqdisho.
Qaraxa oo loo adeegsaday gaari nooca raaxada ah oo laga soo buuxiyey walxaha qarxa ayaa waxaa ku dhintay in ka badan 10 qof, sida ay xaqiijiyeen ilo lagu kalsoon yahay.
Dadka dhintay ayaa waxaa ka mid ah labo Injineer oo Turki ah iyo seddex askari oo ilaalo u aheyd, kuwaas oo la socday gaari nooca aan xabada karin oo marayey halkaasi. Weli lama xaqiijin jiritaan dhimashadda Turkiyiinta.
Wararka ayaa sheegaya in bartilmaameedka weerarka uu ahaa iyaga, waxaana sidoo kale meesha ka agdhow xarun canshuuraha looga qaado gaadiidka isaga kala goosha waddada xiriirisa magaalooyinka Muqdisho iyo Afgooye ee gobolka Shabeelaha Hoose.
Sidoo kale waxaa la xaqiijiyey in qaraxaasi ay ku dhinteen saddex askari oo ka tirsanaa ciidamada dowladda, kuwaas oo goobta ku sugnaa.